Ella, nke kacha mma nke Sri Lanka (akụkụ m) | Akụkọ Njem
Ella, ihe kacha mma Sri Lanka (akụkụ m)
Enric Gili | | Colombo, General, Nduzi, Sri Lanka
Taa, m ga-agwa gị gbasara Ella na gburugburu ya, obodo nke di na ugwu, obodo etiti obodo Sri Lanka. A obere ụzọ ịhụ abụọ-akpali nnọọ mmasị ala ebe si Ella n'otu ụbọchị.
Obodo ahụ anaghị apụta maka ịma mma ya mana ọ bụ mmalite kachasị mma maka njem kachasị mma enwere ike ịme na mba Sri Lanka.
Ọ dị na mpaghara Badulla (nke dị na Uva) na ogologo nke 1050 mita karịa ọkwa mmiri. Ejikọtara ya na Colombo na Kandy (isi obodo nke mba ahụ) site na ụgbọ oloko na n'okporo ụzọ, Ọ dị ihe dịka 200Km site na isi obodo (Colombo). Ihe dị ka mmadụ iri puku anọ na ise bi n’obodo a, ọ bụ ezie na imirikiti n’ime ha ebighị n’obodo ndị mepere emepe kama n’ugwu na ala dị larịị gbara ya gburugburu.
Nyere elu nke mpaghara ahụ na ebe okpomọkụ ihu igwe, mpaghara Uva na gburugburu Ella bụ a zuru okè ọnọdụ maka tii ọkpọ.
Zọ ọ bụla a na-esi azụ azụ na-aga site na Sri Lanka aghaghị ịgafe Ella, ma site ebe ahụ hazie njem dị iche iche.
1 Otu esi aga Ella?
2 Little Adam's Peak (ma ọ bụ Little Sri Pada)
Otu esi aga Ella?
Enwere ike iji ụzọ ma ọ bụ ụgbọ oloko rute ya.
Ọtụtụ okporo ụzọ jikọrọ obodo a na Sri Lanka ndị ọzọ. O doro anya na ụzọ ndị bụ isi na njikọ sitere na ndịda na A2 na A23 (na-agafe Telulla na Wellawaya) na n'ebe ugwu gaa Badulla Nuwara Eliya na Kandy. Na
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, Ella aghọwo ebe dị mkpa na ọkwa ndị njem na ọgbọ nke akụ na ụba amụbawo nke ukwuu, ya mere enwere ọtụtụ ụgbọ ala ọha na eze na-ejikọ obodo na Dambulla, Haputale, Kandy na ọbụna Colombo, isi obodo nke mba ahụ .
Nhọrọ ọzọ ị ga-aga Ella bụ ụgbọ oloko. Naanị otu n'ime ahịrị ndị na-agafe obodo ahụ ruru obodo ahụ, ọkachasị nke jikọtara Colombo na Nanu Oya (Nuwara Eliya), Haputale, Ella na n'ikpeazụ Dambulla.
Onwe m, m na-akwado ime akụkụ nke njegharị site na ụgbọ oloko, a na-ahụta ya dị ka otu n'ime ihe kachasị mma n'ụwa ka ọ na-agafe oke ugwu ugwu dị elu na mbara igwe na ebe ahịhịa na-aga n'ihu. Gakwuru Ya M ga-eme ya site n'ụgbọala ma ọ bụ bọs na-akọrọ, ozugbo ọ bụla ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwaga obodo ma ọ bụ obodo ndị ọzọ mgbe ahụ, n'ụgbọ okporo ígwè.
Traingbọ oloko n’onwe ya dị nwayọ nwayọ Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịga site na Colombo gaa Ella ma ọ bụ site na Kandy ruo Ella, buru n'uche na ime ihe dịka 20Km ụgbọ oloko ahụ ga-achọ opekempe 1 awa. Onu ahia di iche (di otutu onu ahia) dabere na klaasị, mu onwem gara klas nke mbu (site na ndudue) na nke abuo ma o siri ike mchoputa ihe di iche, ihe na-adighi nma bu ichota odida obodo ebe ugbo ala na-agagharị.
Little Adam's Peak (ma ọ bụ Little Sri Pada)
Otu n'ime njem mmụta kpakpando na mpaghara ahụ ma dabara maka onye ọ bụla: ịrịgo Little Adam's Peak; ihe Ascent ya elu bụ pụtara mfe na ngwa ngwa. O sitere n ’ya n’oyiyi (na obere version) ị nwere ugwu dị nsọ nke Sri Lanka, nke a na-akpọ Adam's Peak (na mpaghara ọzọ na na m onwe m gara).
Iji rute n'elu, anyị ga na-agbaso ntụzịaka ndị ahụ n'ụzọ, n'oge niile enwere akara aka iji ruo Little Adam's Peak. Na ngụkọta ihe dị ka elekere 1 gbagoro site na etiti obodo.
Akụkụ nke mbụ na-agba n'okporo ụzọ Ella (B113). Mgbe nkeji ole na ole, na mgbe anyị rutere na Ella Flower Garden Resort, anyị ga-ahụ n'aka nri ihe ịrịba ama nke ga-agwa anyị na anyị kwesịrị ịga n'ụzọ ahụ wee malite ịrị ugwu (kwupụta Little Sri Pada ma ọ bụ Little Adam's Peak).
La akụkụ nke abụọ nke njem mmụta ahụ na-ewere ọnọdụ n'etiti ubi na ubi tii, ọmarịcha ọdịdị ala. Anyị ga-ahụ ubi ahụ n'aka ekpe na aka nri maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara nke ihe fọdụrụ ruo mgbe anyị ruru n'elu.
N'ikpeazụ Nke atọ na nke ikpeazụ, nke nwere steepụ ma dị mfe mkpọda. N’ime nkeji ole na ole, anyị ga-erute n’elu ebe obere Adam Adam toro. Site na nke a, anyị nwere ike ịhụ ndagwurugwu ahụ niile na mpaghara ala ndịda na oke osimiri, Ella na gburugburu ya na ubi tii niile dị na mpaghara ahụ. Ihe okomoko.
Ọzọ dị mkpa njem mmụta si Ella, na ravana dara.
Ndị a bụ dị n'akụkụ okporo ụzọ. Bestzọ kachasị mma iji ruo ha bụ iji bọs ọha na eze si n'obodo ahụ ma na nkeji ole na ole anyị ga-abata na nkwụsị na-esote ọdịda.. Nhọrọ ọzọ bụ ịga ije site na Ella n'okporo ụzọ. N'okwu a ana m akwado bọs, ịga ije n'okporo ụzọ dị warara na Sri Lanka agaghị abụ ezigbo nhọrọ.
Ozugbo anyị ruru, anyị ga-enwe ike ịhụ Ravana Falls n'ihu anyị, iji nweta ọdịda site n'okporo ụzọ ahụ, buru obere ụzọ dị na ya na n'ime nkeji abụọ anyị ga-anọ n'ihu.
Otu ihe na-adọrọ mmasị nke Ravana bụ na ị nwere ike ịsa ahụ na enweghị nsogbu na akụkụ dị ala, ọdịda mmiri site na ịdị elu nke 25 mita dị ntakịrị ma ọ nweghị nsogbu, ọ dị mma.
Ikekwe Can nwere ike ime njem nlegharị anya nke Little Adam na Ravana Falls n'otu ụbọchị, otu n'ụtụtụ na nke ọzọ n'ehihie. Emere m ya dị ka nke a ma ọ na-enye oge iji hụ ihe niile n'ebughị ọsọ na ọbụlagodi iji nwayọ saa ahụ na ọdịda.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Colombo » Ella, ihe kacha mma Sri Lanka (akụkụ m)
Osimiri iri kacha adọrọ mmasị n’ụwa (I)
Mba ndị gara ọtụtụ n ’Asia